बिदेशीले नेपालमा घुम्दा ३१ अर्ब खर्च गर्दा नेपालीले विदेश घुम्दा ४५ अर्ब खर्च गरे
काठमाडौं । विदेश घुमेर नेपालीले पाँच महिनामा ४५ अर्ब रुपैयाँ सकाएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालीले विदेश जादा सकाएको..
‘रोजगार संयोजक’ पदमा जागिर खाने हो ? ७५३ जनाको लागि मागिँदैछ आवेदन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा एकरएक दरबन्दी रहने गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘रोजगार संयोजक’को आवेदन माग गर्ने भएको छ । श्रम मन्त्रालयमा..
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक द्धितिय तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन, यि हुन सफल उमेद्वारहरु (नामावली सहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक द्धितिय तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन, यि हुन सफल उमेद्वारहरु (नामावली सहित) ..
सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा अर्थसमितिको प्रतिवेदन सहितको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मत रुपमामा पारित भएको हो । विधेयक..
गोरखापत्रको जागिरमा यी उम्मेदवारको निस्कियो नाम (नामावलीसहित)
काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानले विभिन्न पदका लागि खुलाएको जागिर अन्तर्गतत लिखिीत परीक्षामा सहभागि उम्मेदवारको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । संस्थानले लिखीतमा उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ । ..
पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले माग्यो कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले विभिन्न ६ पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । प्रतिष्ठानले रिक्त रहेका ती पदहरुमा खुला तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्तीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो..
नेपाल खाद्य संस्थानको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, को को भए पास ?
काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले विभिन्न रिक्त पदपूर्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनअनुसार लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । संस्थानको पदपूर्ति समितिले आन्तरिक र खुल्लातर्फ दुबैका सफल उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको..
एन सी सी बैंकमा रोजगारीको अबसर
एन सी सी बैंकमा रोजगारीको अबसर ..
अब काठमाडौँ–टोकियो सिधा हवाई उडान सुरु हुने
काठमाडौं । करीब २५ वर्ष पहिले नेपाल र जापानबीच भएको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै देशबीच सहमति भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका जापानी समकक्षी तारो कोनो नेतृत्वको..
सिद्धार्थ बैंकले माग्यो १ सय ३७ भन्दा बढी कर्मचारी (सुचना सहित)
काठमाडौं। सिद्धार्थ बैंकले सिनियर अफिसर तहको ब्रान्च म्यानेजर, क्रेडिट डिपोजिट रिलेसनसिप अन्तर्गतका विभिन्न पदको लागि १० जना कर्मचारी माग गरेको छ। यस पदको लागि स्नातक गरी कम्तिमा ४ वर्षको कार्यानुभव..
लोकसेवा आयोगले माग्यो नायव सुब्बा पदमा कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरहको पदहरुमा बुधबार दरखास्त आह्वान छ । आयोगको विभिन्न कार्यालयबाट न्याय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा ठूलो..
पढेलेखेका युवापुस्ताको रोजाइमा पर्न छाड्यो जागिर, किन थाले आफ्नै ब्यापार ब्यवसाय ?
काठमाडौँ। बेलायतको एक युनिभर्सिटीबाट एमबिए गरेकी लाजिम्पाटकी टिना राजभण्डारीलाई पर्यटन व्यवसाय गर्ने इच्छा जाग्यो। सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवसाय थालेकी उनले एक्कासी पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरिन्। उनको सोचलाई साथ दिए ललितपुरका..
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले माग्यो कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र प्रशिक्षक माग गरेको छ । विश्वविद्यालयले निकालेको सूचनाअनुसार आगामी माघ २४ गतेभित्र आवेदन दिन सकिनेछ । ..
अब सङ्घमा आउने कर्मचारीको पनि बढुवा हुने
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र निजामती कर्मचारीबीच बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू सङ्घमा आउँदा बढुवा हुने सुनिश्चित भएको छ । सहमतिअनुसार नायब सुब्बाको बढुवाका लागि सो पदमा..
बुधवार लोकसेवाले नायब सुब्बाको लागि विज्ञापन खुलाउने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन नमिलाएसम्म लोकसेवा आयोगको काम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । लोकसेवा आयोगले समायोजनमा जान नपर्ने कर्मचारीको पदपूर्तिको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले..
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तमा ५० जनालाई जागिरको अवसर, योग्यता प्लस टु पास
काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४५ जिल्लाका शाखा कार्यालयका लागि शाखा प्रबन्धकदेखि प्रशिक्षार्थी सहायकसम्मको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। संस्थाले स्नातक उत्तीर्ण गरी दुई वर्षको कार्यानुभव भएका शाखा प्रवन्धकको लागि..
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तमा रोजगारीको अबसर
काठमाडौं। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले डेपुटी सिइओका लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरी म्यानेजर पदमा रहि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५ वर्ष र बैंकङ क्षेत्रमा ८ वर्षको कार्यानुभव भएकाले आवेदन..
सानिमा बैंकमा रोजगारीको अवसर (सूचनासहित)
काठमाडौं । सानिमा बैंक लि ले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेको छ । बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक नेपाली नागरिकले आवेदन सकिनेछ । थप जानकारीको तलको सूचना हेर्नुहोस् । ..
एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक माग्यो ६०० जना कर्मचारी, प्लस टु पासले आवेदन दिन पाउने (सूचना सहित)
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले आइतबार सूचना जारि गरी एकै पटक ६ सय कमर्चारी माग गरेको हो। बैंकले काठमाण्डौभित्र र बाहिरका शाखामा..
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नतिजा सार्वजनिक, यी हुन् उत्तीर्ण उम्मेदवारहरु (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन अनुसार लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित् परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारको नामावली तल दिइएको छः ..
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा काम गरी फर्केका युवालाई नेपालमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका कोरियाको मानव संशाधन विभागका उपाध्यक्ष र..
एसविआर्इ बैंकमा २२७ लार्इ जागिरको अवसर, अनुभव नभएकाले पनि आवेदन गर्न पाउने
काठमाडौं। नेपाल एसबिआर्इ बैंकले जुनियर सहायक पदमा २ सय २७ जना कर्मचारी माग गरेको छ। स्नातक गरेका साथै अनुभव नभएकाले पनि आवदेन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। २८ वर्षसम्मका नेपाली..
नेपाल आयल निगममा को-कसको नाम निस्कियो ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका लागि लोक सेवा आयोगले विभिन्न पदका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् । ..
पोखराले दैनिक कति पर्यटक थेग्न सक्छ ? नयाँ वर्षका लागि यस्तो छ तयारी
पोखरा । नजिकिँदै गरेको अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा पर्यटकीय नगरी पोखराका होटलहरू बुकिङ हुन थालेको छ । विगत केही वर्षयता पोखरा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएका कारण अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षले त..
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्समा जागिर, खुल्यो प्लस टु पासले पनि आवेदन गर्न सक्ने (सूचनासहित)
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्सले चिफ मार्केटिङ्ग म्यानेजर एक जना, रिजनल म्यानेजार केही, अफिसर, ब्रान्च इन्चार्ज, असिस्टेन्ट र जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कर्मचारी..
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा रोजगारी अवसर, माग्यो सहायकदेखि व्यवस्थापकसम्म
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ । संस्थानले सहायकदेखि व्यवस्थापकसम्मका ३१ जना कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थालने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने गरी यी कर्मचारी माग गरेको हो..
नुवाकोटमा नेपालमै पहिलो जैविक रिसोर्ट, २५ करोडको लगानी
विदुर । कृषि र पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नुवाकोटमा नेपालकै पहिलो एग्रो टुरिजममा आधारित जैविक रिसोर्ट सञ्चालन गरिने भएको छ । नुवाकोटको बेल्कोटगडी नगरपालिका–८ जिलिङको फेदीमा ड्रिम ल्याण्ड रिसोर्ट..
३ लाख बढी कामदार लैजाने तयारीमा जापान, अप्रिलदेखि नेपाली पनि लैजाने
काठमाडौं । जापानले ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान सरकारले १८ वर्ष पुगेका नेपाल सहित ९ देशका कामदारहरुलाई जापान लैजाने तयारी गरेको हो । २०१९..
गाउँपालिकाले नै दियो ३ सय ६६ जनालाई रोजगारी
पर्वत । महाशिला गाउँपालिकाले एकै पटक ३६६ जनालाई रोजगारी दिएको छ । गाउँपालिकाले ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिन थालेको हो । गाउँपालिकाले १५ दिन खटाइएको ठाउँमा स्वयंसेवकको रूपमा काम..
जापानले अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लैजाने, अमेरिकाले नेपालीको भिसा शुल्क घटाउने
काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालीसँग लिँदै आएको भिसा शुल्क घटाउने भएको छ । भिसा प्रोसेसिङको नाममा लिँदै आएको थप दुई सय डलर नलिने भएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका जाने..
Results 840: You are at page9of 28